Amabali EBhayibhile: Ukumkani Wokuqala KaSirayeli Kuse Ekuthinjweni EBhabhiloni - IWebhsayithi Esemthethweni YamaNgqina KaYehova
USawule waba ngukumkani wokuqala wakwaSirayeli. Kodwa uYehova wamcekisa kwaza kwanyulwa uDavide ukuba abe ngukumkani esikhundleni sakhe. Sifumanisa izinto ezininzi ngoDavide. Ngoxa wayesengumfana walwa nengxilimbela enguGoliyati. Kamva wabaleka uKumkani uSawule owayenomona. Emva koko uAbhigali omhle wamnqanda ekwenzeni into yobudenge.
Emva koko, sifunda izinto ezininzi ngonyana kaDavide uSolomon, owangena esikhundleni sikaDavide njengokumkani wakwaSirayeli. Ngamnye kookumkani abathathu bokuqala bakwaSirayeli walawula iminyaka engama-40. Emva kokufa kukaSolomon, uSirayeli wahlulwa kubini, waba bubukumkani basentla nobasezantsi.
Ubukumkani basentla obuzizwe ezili-10 baqhuba iminyaka engama-257 ngaphambi kokutshatyalaliswa ngama-Asiriya. Emva kweminyaka eli-133, ubukumkani basezantsi bezizwe ezibini nabo batshatyalaliswa. Ngeli xesha amaSirayeli athinjelwa eBhabhiloni. Ngoko iCandelo LESINE ligubungela iminyaka engama-510 yembali yaye ebudeni belo xesha kwenzeka iziganeko ezininzi ezibangela umdla.